कतारबाट घर फर्कंदै हुनुहुन्छ ? एकपटक अवस्य पढ्नुहोस् … – Sidha Onlinepatra
नेपालमा पनि पार्किङ ऐनः घरमा पार्किङ रहेको प्रमाणित गरेपछि मात्र सवारी !
मुख्य पृष्ठ /News/कतारबाट घर फर्कंदै हुनुहुन्छ ? एकपटक अवस्य पढ्नुहोस् …
तपाईँ कतारमा हुनुहुन्छ र घर फर्कने टिकट काट्नु भएको छ ? यदि छ भने घर फर्कनलेलाई कोभिड १९ पीसीआर परीक्षण कतार सरकारबाट अनुमति प्राप्त विभिन्न निजी अस्पतालमा गएर गर्न सकिने कतारमा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
सरकारले पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ लिएर आउनेहरुलाई काठमाण्डौमा होटल क्वरेण्टीनमा बस्न नपर्ने निर्णय गरेको छ । तर पीसीआर रिपोर्ट नलिइ आएमा काठमाण्डौमा आफ्नै खर्चमा होटल क्वरेण्टीनमा बस्नुपर्छ ।
त्यसैले तोकिएको स्थानमा कोरोनाको पीसीआर परीक्षण गराउन सकिने र नेपाल आइपुग्ने दिनले ७२ घण्टाभित्रको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ लिएर आएमा विमानस्थलबाट सिधै होम क्वरेण्टीनमा जान पाइनेछ । सरकारले भदौ १६ गतेदेखि पीसीआर परीक्षण सहज भएका देशहरुबाट नियमित उडान गर्दैछ भने पीसीआर सहज नभएका देशमा चार्टर्ड उडान भइ नै रहेको छ ।
हिमालय एअरलाइन्सले दोहा काठमाण्डौ आउँदो ३१ अगष्टमा पनि उडान भर्दैैछ । यसअघि टिकट लिएका र दूतावासको सूचीमा परेकाहरुले पुनः प्रमाणित गर्नका लागि सम्बन्धित एअरलाइन्स कम्पनीमा सम्पर्क गर्नुपर्छ । दोहाबाट काठमाण्डौका लागि १४ सय ३० कतारी रियाल भाडा तोकिएको छ ।
यी ठाउँमा गर्न सकिन्छ पीसीआर परीक्षण :
नेताहरूले देशलाई चारैतिर संकटमा पर्न थाले अब चुप बसेर हुँदैन ; प्रधानसेनापती